साउदी अरबलाई अमेरिकी सिनेटको तगडा झट्का, अब के होला ? – जलजला अनलाइन
Posted on March 15, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on साउदी अरबलाई अमेरिकी सिनेटको तगडा झट्का, अब के होला ?
चैत १, काठमाडौं । साउदी अरबले पछिल्लो तीन वर्षमा यमनमा अमेरिकी हतियारको दममा युद्ध जारी राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रका अनुसार यो युद्धका कारण ८० लाख भोकमरीको स्थितीमा पुगेका छन् ।
यी हुन् श्रीमान् विदेश भएका महिलालाई ब्लाकमेलिङ गर्दै यौनशोषण गर्ने पूर्वसैनिक (नालीबेलीसहित)
Posted on February 25, 2018 Author जलजला अनलाइन
फागुन १३, काठमाडौं । श्रीमान् विदेश भएका महिलालाई ब्लाकमेलिङ गरेर बलात्कार गर्दै आएका एक पूर्वसैनिक पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत ४६ वर्षीय राजेन्द्र आचार्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यो खबर नवराज मैनालीले नेपाललाइभ अनलाइनमा लेखेका छन् । उनले प्रेमीहरुसँग होटलमा जाने महिलालाई पिछा गर्ने र परिवारमा पोल खोलिदिने भन्दै ब्लाकमेलिङ गरेर यौनशोषण गर्दै […]
दाङमा राप्ती समितिले सिण्डिकेटको समर्थनमा देखायो यस्तो चमत्कार !
Posted on April 25, 2018 April 25, 2018 Author Jaljala Online
वैशाख १२, दाङ । राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समितिले बुधबार तुलसीपुरमा प्रदर्शन गरेको छ। उक्त समितिले नियमित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार बसहरू सँगै गुडाएर सडकमा प्रदर्शन गरेको हो। समितिहरूको नविकरण नगर्ने तथा सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी कदम विरुद्ध यातायात व्यवसायी आन्दोलनरत छन्। त्यही कार्यक्रम अन्तरगत बुधबार बिहान दाङको सडकमा समितिका दर्जनौं बसहरूसँगै गुडाएर प्रदर्शन गरिएको […]
सात महिनाकी गर्भवतीसहित ८ जना कलाकार काठमाडौँबाट गिरफ्तार
Posted on December 6, 2017 Author जलजला अनलाइन
मङ्सिर २०, काठमाडौं । दोस्रो चरणको प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रहरीले काठमाडौँबाट ७ महिने गर्भवतीसहित ८ जना कलाकारहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ । ललितपुरको बाडेगाउँस्थित आफ्नै कोठाबाट खाना खाएर सुतिएरहेकी सामना जनसास्कृतिक परिवारमा कार्यरत ७ महिने गर्भवती प्रमिला तामाङलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको हो । उनका परिवारका सदस्यले न्युनतम मानवाधिकारको समेत ख्याल नगरी प्रहरीले लछारपछार गर्दै […]